हरर फ्यानहरू यो ठूलो विचारमा एकजुट भइरहेका छन् - iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार हरर फ्यानहरू यस ठूलो विचारमा एकजुट भइरहेका छन्
हरर फ्यानहरू यस ठूलो विचारमा एकजुट भइरहेका छन्
by तिमोथी Rawles अगस्ट 16, 2017
द्वारा लिखित तिमोथी Rawles अगस्ट 16, 2017
यदि तपाईंसँग अनुप्रयोग छ, वा अहिले डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता नामको खोजी गरेर हामीलाई थप्नुहोस्: iHorror
जब यो डराउने कुरा आउँछ, साँचो प्रशंसकहरूबाट आधिकारिक राय भन्दा बढि केहि अर्थ छैन। हामीले केहि विशेष फेला पारेका छौं जुन तपाईंको रक्तपातलाई संसारमा डरलाग्दो प्रशंसकहरू सुन्न दिनुहोस्। हो, यो महत्त्वपूर्ण छ।
यो भनिन्छ स्टर्डस्ट, एक नयाँ मोबाइल अनुप्रयोग जहाँ तपाईं सिर्जना गर्न, साझेदारी गर्न, र हेर्न सक्नुहुनेछ -3- second० दोस्रो "प्रतिक्रिया" भिडियो चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू, र अरूसँग ट्रेलरहरू। यो डरावनी प्रशंसकहरूको लागि बनाईएको अवधारणाको दर्जी हो, र हामी इमान्दारी रूपमा यकिन छैनौं कि पहिले यस बारेमा कसैले सोचेन।
स्टारडस्टर्सले भर्खरको "IT" ट्रेलरलाई कसरी प्रतिक्रिया देखायो जाँच गर्नुहोस्:
हरर फ्यानहरू प्रायः यो सहि हुन्छन्। वर्षौंको अनुभवले हामीलाई यसो गर्न अनुमति दिन्छ, "हामी जान्दछौं हामी के चाहन्छौं र के हामी के गर्दैनौं।" हामी सम्भवतः एक मात्र समुदाय हौं जुन हाम्रो समीक्षाको आधारमा फिल्म गति दिन सक्दछ। प्राय: हामी यसलाई सोशल मिडिया मार्फत गर्छौं।
समस्या यो हो, खाना वा चित्रको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, आमाबाट राजनैतिक पोष्टहरूका बीच एक अर्कालाई भेट्न गाह्रो छ।
र सबै भन्दा खराब, विज्ञापनहरू! हामीलाई अरू सबै बकवासबाट स्वतन्त्र हुनुको बीच डराउने कुराको लागि समर्पित ठाउँ चाहिन्छ।
स्टर्डस्ट दुष्ट डाक्टरले आदेश गरेको जस्तै हुन सक्छ, यो केवल पहिलो प्रशंसकहरू बीच चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू, र ट्रेलरहरूको छलफलको लागि निर्मित पहिलो सामाजिक अनुप्रयोग हो।
हामीलाई यसको बारेमा के मनपर्दछ कि यो ट्रोल प्रूफ पनि हो, शब्दहरूको पछाडि कोही लुकेको हुँदैन र प्रत्येक प्रतिक्रिया इमान्दार र रमाईलो छ किनकि तिनीहरूको विचारहरू ताजा छन्।
के अन्नाबेले राम्रो जम्प डराउने एक स्ट्रिंग थियो? वा त्यहाँ एक महान कथा थियो?
तपाईंको साथीको सबैभन्दा नयाँ प्रतिक्रियाहरू हेर्नुहोस् अन्य फ्यानहरूले के भनिरहेछन् हेर्नुहोस्
स्टर्डस्टमार्केटिंगका निर्देशक, जेक कोन्नेरले यो राम्रोसँग भने, "डराउने प्रशंसकहरू त्यहाँका धेरै जोशिलो, भोकल र रचनात्मक मानिसहरू हुन्। हामी समुदायलाई एक सजिलो र शक्तिशाली तरीका उनीहरूको अस्पष्ट विचारहरु एक अर्का संग साझा गर्न चाहन्छौं। "
भर्खरै "Alien: Coveament" सिनेमाको बीचमा स्वाथ काट्यो, बीचमा तल। केही व्यक्तिहरूले यो एउटा थ्रो-ब्याक हो भन्ठाने; मूल "एलियन" फिल्मको लागि एक श्रद्धांजलि, जबकि अरूले यो प्रेमिका श्रृ from्खलाबाट लाभ उठाउन आलस्य प्रयास गरे।
जे भए पनि, यो अत्यधिक प्रत्याशित गर्मी ब्लकबस्टर प्रशंसक र सोशल मिडिया बजको प्रतिक्रिया द्वारा संचालित थियो। एक डरावनी प्रेमी को रूप मा तपाईंको राय यसको सफलता मा फर्कन्छ? पक्कै।
तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंले विश्वास गर्नु भएको वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विचारहरू बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। हामीले पत्ता लगायौं कि उनीहरूलाई भिडियोमा हेर्नु 10x अधिक शक्तिशाली, र 10x रमाईलो छ।
तपाईंको प्रोफाइल बनाउनुहोस् फिल्म, शो र ट्रेलरहरूमा प्रतिक्रिया
स्टर्डस्ट वास्तवमा त्यो डरावनी प्रशंसकहरूको लागि हो। कसैको प्रोफाइल हेरेर तपाईको प्रतिक्रियाहरूको संग्रह देखाउँदछ, जसले तत्काल तपाईलाई अनुभूति दिन्छ कि तिनीहरू वास्तवमै प्रशंसकको रूपमा को हुन्।
तपाईं सजिलैसँग आफ्नो डरावनी मित्रहरू र मनपर्ने व्यक्तिहरूको प्रतिक्रियाहरू वास्तविक समयमा देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तो प्रत्येक फिल्म, शो, वा ट्रेलरले बजारमा हिर्काउँछ।
तपाईले दशक विगतका चलचित्रहरू र कार्यक्रमहरूमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, ब्लकबस्टरहरूदेखि कम ज्ञात इंडियाहरू सम्म जुन तपाईं विश्वको बारे जान्न चाहानुहुन्छ।
स्टारडस्ट डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस् यहाँ.
स्टारडस्ट लाई पछ्याउनुहोस् फेसबुक र twitter.
कसरी जेम्स क्यामेरनले द ओड्सलाई हरायो र उत्तम सीक्वल बनायो
"IT" IMAX उपचार प्राप्त गर्दैछ